पालुङटारमै पछारिएपछि लाजमर्नु
एसएलसीका बोर्डफस्ट बाबुराम २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा फेल । निकै फुर्तिफार्तीका साथ नयाँशक्ति पार्टी गठन गरेर झ्याली त पिटियो, नतिजा बाठो खान्छ तीन बल्ड्याङ पो देखियो । अनि मुख नछोपे के गर्ने ?
पालुङटार, बाबुरामको आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र । उनको गाउँक्षेत्र पनि यही हो । दुई दुई संविधानसभाको निर्वाचनमा रेकर्डतोड मत ल्याएर जित हासिल गरेका बाबुराम त्यही क्षेत्रबाट उत्तानोप्रसाद बने । जनताको मन हो, जनताको मत हो, जनतालाई मन नपरेपछि यस्तो दिन आउने रहेछ ।
बाबुराम घरका न घाटका भए भन्ने बुझेछन् क्यार प्रचण्डले, आफ्ना कार्यकर्ता लगाएर भन्न थालेका छन् : घर फर्क ।
कुन मुखले फर्कने माओवादी केन्द्र । हुन त राजनीति हो, माटोका भाँडोजस्तो होइन, जति पटक फुटेर पनि जोडिन सक्छ । अव पालुङटारमा पुन: स्थापित हुनका लागि बाबुरामलाई निकै पापड बेल्नुपर्ने भयो । अर्को ५ वर्षसम्म के हुन्छ, के हुन्न, कसलाई थाहा छ र ? यो मौका त हातबाट गुम्यो, गुम्यो ।
यद्यपि बाबुराम बुद्धिजीवी हुन् र उनले जनादेशलाई स्वीकार गरे । मुटुमाथि ढुंगा राखेरै भए पनि स्वीकार गरे । र भनेका छन्– नवजात शिशु नयाँ शक्तिलाई लड्दै पड्दै दौडन सिक्न र वैकल्पिक राजनीतिको लामो यात्रा तय गर्न जनताले दिएको आदेशलाई हामी विनम्रतासाथ स्वीकार्छौं । स्मरणरहोस्, बाबुरामको पालुङटारमा कांग्रेसले चुनाव जित्यो । यो अप्रत्यासित झट्काले बाबुराम घायल छन् ।
हो भाइ फुटे गवाँर लुटे देखियो पालुङटारमा । माओवादी केन्द्रले बाबुरामलाई जित्न नदिने, सके आफै जित्ने भनेर खडा हुँदा कम्युनिष्ट गढ कांग्रेसको कर्मथलो बन्न पुग्यो । शिक्षा लिने भए यो घटना देशका लागि पनि उपमा बन्नसक्छ र राजनीतिक दलहरुले एकताका साथ देश निर्माणमा लाग्न सक्छन् । अन्यथा जे गति देखियो पालुङटारको, राष्ट्रिय सन्दर्भमा विदेशीले त्यस्तै गति देखिउन सक्छन् ।